UMhlahlandlela WABazali Wamahhala wokuvuselela i-Internet pornog-Pandemic - Umvuzo
Ikhaya Ibhulogi yezindaba UMhlahlandlela Wabazali Abamahhala wokuvuselelwa kwe-Internet pornog-Pandemic
i-adminacount888 I-18th February ngo-2021 Imfundo, Impilo, Izindaba zakamuva
Ukuphazamiseka kwe-Autism Spectrum
Amavidiyo Amfishane Ekuvikeleni Izingane
Imibhalo emisha eyenziwe ngabazali kubazali ngemiphumela ye-Porn ezinganeni
Siza ngalezo zingxoxo ezinzima
Amathiphu aphezulu wokukhuluma nezingane
Amathiphu aphezulu mayelana nama-Smartphones
Iziphi izinhlelo zokusebenza ezingasiza?
Setha kabusha ubuchopho bengane yakho
Izincwadi Zezingane Ezincane
Izinsiza ezingaphezulu zamahhala zabazali
Amawebhusayithi athola abasebenzisi abasha
Izinsizakusebenza zokutakula ezisekelwe okholweni
Ukusekelwa okwengeziwe kusuka ku-Reward Foundation
Ngaphambi kokuqala lolu hlolo mayelana nezingozi ezungeze i-porn, ake sikhumbule ukuthi kungani kubalulekile. Sifuna izingane zikhule zibe nobudlelwano obujabulisayo, obunothando futhi obuphephile. Buka lokhu ividiyo ebukekayo, "Luyini uthando?" ukusikhumbuza ukuthi kubukeka kanjani ekusebenzeni.
Njengabazali nabanakekeli niyizibonelo ezibaluleke kakhulu nomthombo wokuqondisa ezinganeni zenu. Kuze kube yiminyaka engu-18, okungenani, unesibopho senhlalakahle yabo. Lo mhlahlandlela wabazali ezithombeni ezingcolile ze-inthanethi uzokusiza uzizwe uqiniseka ngokwanele ukuba nalezo zingxoxo eziyinselele. Funda ngemiphumela yezempilo yezengqondo ye-porn, umthelela ngokomzimba, kanye nemiphumela emibi yezocansi. Lolu lwazi luzokuvumela ukuthi uvikele izingane zakho ebangeni lokulimala okutholakale ngochwepheshe bezempilo kanye nezinkulungwane zabasebenzisi bangaphambili. Sifaka isigaba sokuthumela imiyalezo yocansi kanye nemithelela esemthethweni kuwe nasenganeni yakho.
Ngesikhathi salo bhubhane, isithukuthezi sizovumela izingane ezengeziwe ngengozi noma ngokuklama, ukuhlangabezana nokutholakala okungapheli kwezithombe zocansi ezinzima. Ngaphandle kokuthi uzifundise, bese ufundisa izingane zakho, ngemiphumela engaba khona empilweni yengqondo nengokwenyama, khona-ke kukhona ubungozi enganeni yakho eba nezinkinga ezihlobene nocansi ngokuzayo. Siyaxolisa ukungabi nethemba, kepha lesi isheke sangempela. Intsha yiyona esengozini enkulu ekuthuthukiseni izinkinga zempilo yengqondo nokulutha ngokuhamba kwesikhathi. Nansi okuhle ividiyo emfushane ngudokotela wezifo zengqondo okhathazekile ekhuluma ngokubhekana nalolu bhubhane.
Ucwaningo oluvela eBritish Board of Film Classification
Ngokusho kwalokhu ucwaningo kusuka ku-2019, izingane ezineminyaka engu-7 no-8 ubudala zikhubeka ezithombeni zobulili ezingcolile ezinzima. Bekunabazali nabantu abasha abangu-2,344 XNUMX ababambe iqhaza kulolu cwaningo.
Iningi labantu abasha okokuqala ababuka izithombe zobulili ezingcolile laba ngengozi, kanti izingane ezingaphezu kuka-60% ezazineminyaka engu-11-13 ezazibonile izithombe zobulili ezingcolile zithi ukubukela kwazo izithombe zobulili ezingcolile kwakungeyona inhloso.
Izingane zichaze ukuzizwa "zikhungathekile" futhi "zididekile", ikakhulukazi lezo ezazibone izithombe zobulili ezingcolile zineminyaka engaphansi kwengu-10.
Abangaphezu kwesigamu (51%) abaneminyaka engu-11 kuya kwengu-13 babike ukuthi bake bazibona izithombe zobulili ezingcolile ngesinye isikhathi, bakhuphukela kuma-66% abaneminyaka engu-14-15 ubudala.
I-83% yabazali ivumile ukuthi izilawuli zokuqinisekisa iminyaka kufanele zibe khona ezithombeni ezingcolile eziku-inthanethi
Lo mbiko uphinde wakhombisa ukungafani phakathi kwemibono yabazali nokuthi yini empeleni izingane ezihlangabezana nayo. Amakota amathathu (75%) wabazali abenomuzwa wokuthi ingane yabo ibingeke ibone izithombe zocansi online. Kodwa ezinganeni zabo, ngaphezulu kwengxenye (53%) bathe empeleni bakubonile lokho.
UDavid Austin, oyiChief Executive of the BBFC, uthe: "Izithombe zobulili ezingcolile njengamanje zisendaweni eyodwa yokuchofoza izingane zayo yonke iminyaka yase-UK, futhi lolu cwaningo lusekela ubufakazi obandayo bokuthi luthinta indlela abantu abasha ababuqonda ngayo ubudlelwano obunempilo, ubulili, isithombe somzimba nokuvuma. Ucwaningo lukhombisa nokuthi lapho izingane ezincane - kwezinye izimo ezineminyaka eyisikhombisa noma eyisishiyagalombili ubudala - ziqala ukubona izithombe zobulili ezingcolile kwi-inthanethi, imvamisa azenziwa ngamabomu. ”
Iningi lezingane nabazali okwaxoxwa nabo babekholelwa ukuthi ukuqinisekiswa kweminyaka yobudala kuzovimbela izingane ukuthi zingaboni ngengozi izithombe zobulili ezingcolile zisencane, futhi kungahle kubambezele iminyaka lapho bezichaye khona.
I-83% yabazali okuxoxwe nabo ivumile ukuthi kufanele kube nezilawuli zokuqinisekisa iminyaka yobudala bezithombe zocansi eziku-inthanethi. Ucwaningo lukhombise nokuthi abantu abasha bafuna ukuqinisekiswa kweminyaka - izingane ezingama-47% bezwe ukuthi ukuqinisekiswa kweminyaka kungumbono omuhle, kanti abaneminyaka engu-11-13 ubudala bavuna kakhulu kunentsha esikhulile.
Umkhuba wezithombe zocansi unamandla okudala imiphumela emibi elandelayo:
uzizwa uthukuthele lapho ungakwazi ukufinyelela i-porn
Uhlu olungenhla luhunyushwe encwadini "I-Trap Porn”NguWendy Malz. Yize iningi lalokhu lihlobene nentsha esikhulile kanye nabantu abadala, ezinye zihlangabezana nezingane futhi.
Ngesikhathi sokuthomba, izingane ziqala ukuba nelukuluku ikakhulukazi ngocansi futhi zifuna ukufunda okuningi ngangokunokwenzeka ngazo. Kungani? Ngoba into yokuqala eza kuqala kwezeMvelo ukuzala ngocansi, ukudlulisa izakhi zofuzo. Futhi sihlelelwe ukuthi sigxile kukho, sikulungele noma cha. I-intanethi yindawo yokuqala izingane eziqala ukufuna izimpendulo.
Ukutholwa kwezithombe zocansi zamahhala, ukusakazwa, okunobunzima obunzima kungenye yezindlela ezinkulu kakhulu zokuhlola umphakathi ezingakaze zivunyelwe emlandweni. Ingeza uhla lonke olusha lokuziphatha okuyingozi ebuchosheni obuvele bufuna ubungozi. Bona le vidiyo emfishane ukuqonda okuningi mayelana ubuchopho obusha nezeluleko kubazali ezivela ku-neuroscientist.
Abafana bavame ukusebenzisa izingosi ze-porn ukwedlula amantombazane, futhi amantombazane akhetha izingosi zokuxhumana futhi athakazela kakhulu izindaba ezingamanyala, njenge-Shades engu-50 kaGrey. Lokhu kuyingozi ehlukile yamantombazane. Ukwenza isibonelo, sizwe ngentombazane eneminyaka engu-9 ubudala eyayilanda futhi ifunda i-porn eilandisayo kwi-Kindle yayo. Lokhu kwenzeka yize umama wakhe efaka imikhawulo nezilawuli kuwo wonke amanye amadivayisi akwazi ukufinyelela kuwo, kepha hhayi uMusa.
Intsha eningi ithi ifisa sengathi abazali bayo bazosebenza kangcono ekuxoxeni nabo ngezithombe zocansi. Uma bengakwazi ukukucela usizo, bazoyaphi?
Iwebhusayithi enkulu kunazo zonke futhi ethandwa kakhulu I-Pornhub igqugquzela amavidiyo akhiqiza ukukhathazeka njengobulili obucashile, ukuhlukunyezwa, ukuhlukunyezwa, ukudlwengulwa kanye namaqembu ezigebengu. Incest ingenye yohlobo olukhula ngokushesha ngokusho I-Pornhubeyakho imibiko. Iningi lawo likhululekile futhi litholakala kalula. I-Pornhub ibona ubhadane njengethuba elihle lokuxhumana nabasebenzisi abaningi futhi inikezela ukufinyelela kwamahhala kumasayithi abo we-premium (avame ukukhokhelwa) kuwo wonke amazwe.
Uma unengane ehlolwe ukuthi isesigabeni se-autism, kudingeka wazi ukuthi ingane yakho ingaba sengcupheni enkulu yokubanjwa yizithombe zocansi kunezingane ezingenayo imizwa. Uma usola ukuthi ingane yakho ingahle ibe semkhakheni, kungaba umqondo omuhle ukuba nayo ihlolwe uma kwenzeka. Izinsizwa ikakhulukazi ezine-ASD noma izidingo ezikhethekile zokufunda zimelwe ngokungenakulinganiswa ezibalweni zokona ngokocansi. Kuthinta okungenani Abantu abangu-1-2% kwinani labantu bebonke, ukwanda kweqiniso akwaziwa, kepha kungaphezu kuka U-30% wabenzi bobulili basesibukweni noma banenkinga yokufunda. Nayi ifayili le- iphepha elisha mayelana nesipiliyoni sensizwa eyodwa. Xhumana nathi ukuthola iphepha uma kudingeka.
Isifo se-Autism spectrum yisimo semizwa esivele kusukela ekuzalweni. Akuyona inkinga yempilo yengqondo. Yize kuyisimo esivame kakhulu kakhulu kwabesilisa, u-5: 1, nabesifazane bangaba naso. Ngemininingwane engaphezulu funda lawa mabhulogi ku- porn and autism; indaba kamama; futhi autism: yangempela noma fake?
Amavidiyo amafushane wokuvikela izingane
Le minithi ye-2, iyagqama izithombe inikeza ukubuka konke okusheshayo futhi isekele isidingo esiphuthumayo sokuqalisa komthetho wokuqinisekisa iminyaka ukuvikela izingane. Ungayikhombisa nezingane zakho njengoba ingenazo izithombe ezingcolile. Ungabhalela neLungu lePhalamende lakho noma ngabe ukuphi futhi ufune ukuthi uhulumeni asebenzise umthetho wokwakha umthetho wokuqinisekisa iminyaka ukuvikela izingane zakho online.
Le 5-umzuzu ividiyo icashunwe kudokhumentari evela eNew Zealand. Kuyo i-neurosurgeon ichaza ukuthi bunjani ubulutha be-porn futhi bubonisa ukuthi kufana kanjani nokulutha kwe-cocaine.
Kule nkulumo yeTEDx “Ubulili, i-Porn nobudoda“, USolwazi Warren Binford, ekhuluma njengomama futhi enguthisha okhathazekile, unikeza umbono omuhle kakhulu wokuthi izithombe zocansi zizithinta kanjani izingane. Le nkulumo yeTEDx kaProfesa Gail Dines “Ukukhulela esikweni eliqukethe ezocansi”(13 mins) uchaza ngokusobala ukuthi ama-video omculo, izingosi zocansi kanye nemithombo yezokuxhumana kubumba kanjani ubulili bezingane zethu namuhla.
Nayi inkulumo ehlekisayo ye-TEDx (imizuzu engu-16) ebizwa ngokuthi “Yeka ukuthi i-Porn Porn ihlukumeza kanjani ngokocansi”Ngumama waseMelika kanye nomfundisi wezocansi Cindy Pierce. Umhlahlandlela wabazali bakhe uthi kungani izingxoxo eziqhubekayo nezingane zakho mayelana nezithombe zobulili ezingcolile zidingeka kakhulu nokuthi yini enentshisekelo kubo. Bona ngezansi ukuthola izinsiza eziningi mayelana nokuthi ungaba kanjani nalezo zingxoxo.
Izingane ezineminyaka eyisithupha ubudala zifinyelela ezithombeni zobulili ezingcolile. Ezinye izingane ziyahehwa futhi zifune kakhulu lokhu, ezinye zihlukumezekile futhi zibe nobusuku obunzima. Izinto zokwenziwa ngabantu abulukhuni azilungele izingane zanoma yimuphi unyaka ngenxa yesigaba sazo sokukhula kobuchopho. Nayi umbiko olusha ngo-2017 olubizwa ngokuthi “… bengingazi ukuthi kuyinto ejwayelekile ukubuka…” ukuhlolwa kwekhwalithi nobungako bomthelela wezithombe zobulili ezingcolile eziku-inthanethi kumagugu, izimo zengqondo, izinkolelo nokuziphatha kwezingane nentsha. ” Ithunyelwe yi-Middlesex University yi-NSPCC kanye noKhomishani Wezingane waseNgilandi naseWales.
Yazi ukuthi ukuzithiba kuyinselele kanjani entsheni. Le yinkulumo enhle kakhulu ye-TEDx ebizwa Ukushisa Kwesikhashana: Umphumela Wokuvuswa Kocansi Ekwenzeni Izinqumo Ngokobulili.
Sincoma ngokuphelele ukuthi ubukele le vidiyo entsha. Ungakwazi bukela i-trailer yamahhala kuVimeo. Kungumibhalo eyenziwe ngabazali, abathi bangabenzi befilimu, yabazali. Ukuhlaziywa okuhle kakhulu kwendaba esesibonile futhi kunezibonelo ezinhle zendlela yokuba nezingxoxo ezikhohlisayo nezingane zakho.
Ukubuka ividiyo eyisisekelo kubiza u- £ 4.99 kuphela futhi kuyimali esetshenziswe kangcono kakhulu ongayethemba. (Asitholi mali ngalokhu kuncoma.) Ochwepheshe abaningi nezinsizakusebenza esizincomayo kule mhlahlandlela wabazali nazo ziyavela kuleyo documentary. URob noZareen basebenzise yonke imali nobungcweti babo ekwenzeni lokhu kube yisevisi kwabanye abazali, ngakho-ke sicela uthenge uma ungakwazi. Ngiyabonga. Uma ungafuni ukusebenzisa imali, kukhona amanye amavidiyo amahle kakhulu atholakala mahhala mahhala.
“Ungasoli namahloni” ingane yokubuka izithombe zocansi. Kuyo yonke indawo eku-inthanethi, kuvela ezinkundleni zokuxhumana nakumavidiyo omculo. Kungaba nzima ukukugwema. Ezinye izingane ziyidlulisa ngenxa yokuhlekisa noma i-bravado, noma ingane yakho ingakhubeka kuyo. Kungenzeka ukuthi nayo bayifuna ngenkuthalo. Ukwenqabela ingane yakho ukuyibuka kuphela kuyenza ilingeke ngokwengeziwe, ngoba njengoba isisho sakudala siqhubeka, 'Izithelo ezingavunyelwe ziyathandeka kakhulu'.
Gcina imigqa ye ukuxhumana kuvulekile ngakho-ke ukuthi uyisiteshi sabo sokuqala sokushayela ukuxoxisana ngezinkinga eziphathelene nocansi. Izingane zithandana ngokwemvelo ngezocansi kusukela esemncane. I-porn e-intanethi ibonakala njengendlela epholile yokufunda ukuthi ingaba kanjani okuhle kwezocansi. Vula futhi uhloniphe imizwa yakho mayelana nezithombe zobulili ezingcolile. Cabanga ukukhuluma ngokuzithokozisa kwakho kocansi njengomuntu osemncane, ngisho noma kungakuzwa kahle.
Izingane azidingi inkulumo eyodwa enkulu ngocansi. Bona udinga izingxoxo eziningi ngokuhamba kwesikhathi njengoba bedlula eminyakeni yentsha. Ngamunye kufanele abe neminyaka efanelekile, cela usizo uma uludinga. Obaba nomama bobabili badinga ukubamba iqhaza ekuzifundiseni bona kanye nezingane zabo ngomthelela wobuchwepheshe namuhla.
Ukubhekana nemibhikisho: Izingane zingase zibhikishe ekuqaleni, kodwa izingane eziningi zisitshele ukuthi zingathanda ukuthi abazali bazo bazibekele isikhathi sokufika ekhaya futhi bazinikeze imingcele ecacile. Awenzeli ingane yakho umusa ngokubashiya 'ngokoqobo' kumadivayisi abo.
Ungazizwa unecala ngokuthatha isenzo sokuzibandakanya nezingane zakho. Impilo yabo yengqondo nokuphila kahle kakhulu ezandleni zakho. Zivikele ngolwazi nangenhliziyo evulekile ukusiza ingane yakho ukuba ihambe kule nkathi enselele yentuthuko. Nansi iseluleko kusuka kwengane yengqondo yengane.
Recent ucwaningo iphakamisa ukuthi izihlungi zizodwa ngeke zivikele izingane zakho ekutholeni izithombe zocansi eziku-inthanethi. Lo mhlahlandlela wabazali ugcizelela isidingo sokugcina imigqa yokuxhumana ivulekile ibaluleke kakhulu. Ukwenza i-porn ibe nzima ukufinyelela kepha kuhlala kuyisiqalo esihle ikakhulukazi ngezingane ezincane. Kuyafaneleka ukubeka ehlunga kuwo wonke amadivayisi e-inthanethi futhi ukuhlola on a njalo ukuthi bayasebenza. Bheka nge-Childline noma umhlinzeki wakho we-inthanethi mayelana nezeluleko zakamuva zokuhlunga.
Owayenguprofesa wesayensi yezenhlalo, umbhali nomama, uDkt Gail Dines, ungumsunguli weCulture Reframed. Mbone ekhuluma nge-TEDx “Ukukhulela esikweni eliqukethe ezocansi”(13 amaminithi). Yena nethimba lakhe sebesungule ikhithi yamathuluzi yamahhala, esebenza kahle kakhulu ezosiza abazali ukukhulisa izingane ezinamandla okulwa nezocansi. Ungaba kanjani nengxoxo: bona ifayela le- Amasiko aphikisiwe Abazali Uhlelo.
Le yincwadi entsha kaColette Smart, umama, owayenguthisha nodokotela wezengqondo ebizwa ngokuthi “Bazolunga“. Incwadi inezibonelo eziyi-15 zezingxoxo ongaba nazo nezingane zakho. Le webhusayithi inabanye okwaxoxwa nabo nge-TV nombhali abelana ngemibono ebalulekile nayo.
Ukudambisa ukunika ingane yakho i-smartphone noma ithebhulethi isikhathi eside ngangokunokwenzeka. Omakhalekhukhwini basho ukuthi ungaxhumana nabo. Yize kungahle kubonakale njengomvuzo wokusebenza kanzima esikoleni samabanga aphansi noma sabaqalayo ukwethula ingane yakho nge-smartphone lapho ingena esikoleni samabanga aphakeme, bheka lokho ekwenzayo ekutholeni kwabo imfundo ezinyangeni ezilandelayo. Ngabe izingane zidinga ngempela ukufinyelela i-inthanethi amahora angama-24 ngosuku? Ngenkathi izingane zingathola imisebenzi eminingi yasekhaya eku-inthanethi, ingabe ukusetshenziswa kokuzijabulisa kungavinjelwa imizuzu engama-60 ngosuku, noma njengesilingo? Bangu eziningi zokusebenza ukuqapha ukusetshenziswa kwe-intanethi ngokukhethekile ngezinhloso zokuzijabulisa. Izingane ze-2 iminyaka nangaphansi akufanele zisetshenziswe izikrini.
Vala i-intanethi ebusuku. Noma, okungenani, khipha zonke izingcingo, amaphilisi namadivayisi wemidlalo egumbini lokulala lengane yakho. Ukuntuleka kokulala okubuyisayo kukhulisa ukucindezeleka, ukucindezeleka nokukhathazeka ezinganeni eziningi namuhla. Badinga ukulala ubusuku bonke, okungenani amahora ayisishiyagalombili, ukubasiza bahlanganise ukufunda kosuku, kubasize bakhule, babe nemizwa yemizwa futhi bazizwe bephilile.
Vumela izingane zakho zikwazi lokho I-porn yenzelwe i-dollar yezigidigidigidi izinkampani zobuchwepheshe ukuze "hook" abasebenzisi ngaphandle kokwazi kwabo ukwakha imikhuba ebagcina bebuyela kokunye. Konke kumayelana nokugcina ukunakwa kwabo. Izinkampani zithengisa futhi zabelane ngolwazi olusondelene mayelana nezifiso nemikhuba yomsebenzisi kubantu besithathu nakubakhangisi. Kwenziwa ukuba kube umlutha njengokudlala online, ukugembula kanye nemithombo yezokuxhumana ukugcina abasebenzisi beza ngokuningiliziwe ngokushesha lapho sebenesithukuthezi noma bekhathazekile.
Kunezinhlelo eziningi zesoftware nezinketho zokusekelwa. Ikydz uhlelo lokusebenza lokuvumela abazali ukuthi baqaphe ukusetshenziswa kwezingane zabo. Igalari Guardian yazisa abazali lapho kuvela isithombe esisolisayo kudivayisi yengane yabo. Iphathelene nezingozi ezenzeka ngokuthumelelana imiyalezo yocansi.
Moment is a uhlelo lokusebenza lwamahhala evumela umuntu ukuthi aqaphe ukusetshenziswa kwakhe online, asethe umkhawulo futhi athole izingqinamba lapho efinyelela leyo mikhawulo. Abasebenzisi banokuthambekela kokubukela phansi ukusetshenziswa kwabo ngemajini ebalulekile. Lolu hlelo lokusebenza luyafana kodwa alukhululekile. Kuyasiza abantu ukuqala kabusha ubuchopho babo ngosizo endleleni. Kuyabizwa I-Brainbuddy.
Nazi ezinye izinhlelo ezingaba wusizo: Isivumelwano Samehlo; Bark; I-NetNanny; Mobicip; Ukulawulwa Komzali eQustodio; WebWatcher; I-Norton Family Premiere; I-OpenDNS Ikhaya le-VIP; I-PureSight Multi. Ukuvela kwezinhlelo kulolu hlu akusho ukugunyazwa yiReward Foundation. Asitholi inzuzo yezezimali ngokuthengiswa kwalezi zinhlelo zokusebenza.
Incwadi enhle kunazo zonke emakethe ngeyethu ohloniphekile ongumcwaningi uGary Wilson. Singakusho lokho, kepha kuyenzeka kube yiqiniso. Ibizwa ngokuthi “Ubuchopho bakho ku-Porn: Izithombe zobulili ezingcolile ze-intanethi kanye neSayensi eVukayo yokuMlutha”. Kuyisiqondisi esihle sabazali futhi. Yinike izingane zakho ukuba zifunde njengoba inamakhulu izindaba ezenziwa abanye abantu abasha nokulwa kwabo ne-porn. Abaningi baqala ukubuka i-porn ye-intanethi besebancane.
UGary ungumfundisi wesayensi omuhle kakhulu ochaza umvuzo wobuchopho, noma isisusa, ngendlela efinyeleleka kakhulu kwabangewona ososayensi. Incwadi iyisibuyekezo esithandwayo sakhe I-TEDx ukukhuluma kusuka ku-2012.
Incwadi itholakala nge-paperback, ku-Kindle noma njenge-audiobook. Empeleni inguqulo yomsindo iyatholakala MAHHALA e-UK lapha, nakubantu abase-USA, lapha. Yabuyekezwa ngo-Okthoba 2018 ukubheka ukuqashelwa kweWorld Health Organisation kwesigaba esisha sokuxilongwa kwe- “Isiphazamiso Ekuziphatheni Kokuziphatha Kocansi okucashile“. Ukuhumusha kuyatholakala ngesiDashi, isi-Arabhu nangesiHungary kuze kube manje, kanti ezinye zisepayipini.
Incwadi yengqondo yengane uDkt Victoria Dunckley "Setha kabusha i-Brain yengane yakho"Futhi mahhala blog chaza imiphumela yesikhathi esiningi kakhulu sesikrini ebuchosheni bengane. Okubalulekile ukuthi kubeka uhlelo lokuthi abazali bangenzani ukusiza ingane yabo ukuthi iphinde ibuyele emzileni wayo.
UDkt Dunckley akakuhlukanisi ukusetshenziswa kocansi kepha ugxila ekusetshenzisweni kwe-inthanethi ngokujwayelekile. Uthi cishe izingane ezingama-80% azibonayo azinazo izinkinga zempilo yengqondo ezitholakale zinazo futhi zelashelwa zona, njenge-ADHD, ukuphazamiseka kwengqondo okuguquguqukayo, ukudangala, ukukhathazeka njll kepha kunalokho zinalokho ezikubiza ngokuthi 'i-electronic screen syndrome. ' Lesi sifo silingisa izimpawu zezinkinga eziningi ezivamile zempilo yengqondo. Izingqinamba zezempilo yengqondo zingelapheka / zinciphiswe ngokususa amagajethi we-elekthronikhi isikhathi esingamasonto ama-3 ezimweni eziningi, ezinye izingane zidinga isikhathi eside ngaphambi kokuthi ziqale ukusetshenziswa kodwa ezingeni elilinganiselwe kakhulu.
Incwadi yakhe iphinde ichaze ukuthi abazali bangakwenza kanjani lokhu kumhlahlandlela wabazali ngesinyathelo ngasinye ngokubambisana nesikole sengane ukuqinisekisa ukubambisana okuhle kakhulu ezinhlangothini ezimbili.
Isazi sokusebenza kwengqondo esidumile uProfesa Philip Zimbardo noNikita Coulombe bakhiphe incwadi enhle kakhulu ebizwa ngokuthi Umuntu uphazamiseke ngokuthi kungani izinsizwa zithola ubunzima namuhla nokuthi yini esingayenza ngakho. Iyanwebisa futhi ivuselele inkulumo ethandwayo ye-TED kaZimbardo ethi “The Demise of Guys”. Ngokuya ngocwaningo oluqinile, ibeka ukuthi kungani amadoda evutha amalangabi ezifundweni futhi ehluleka emphakathini nakwezocansi nabesifazane.
Amabhuku Ezingane Ezincane
Ibhokisi likaPandora livulekile. Manje ngenzani? " UGail Poyner ungumqondo wezengqondo futhi unikeza ulwazi oluwusizo lobuchopho kanye nokuzivocavoca okulula ukusiza izingane zicabangele ngezinketho.
"Izithombe ezinhle, izithombe ezimbi"NguKristen Jensen noGail Poyner. Futhi incwadi enhle egxile engqondweni yengane.
Akunabantwana. Ukuvikela izingane. U-Liz Walker ubhale incwadi elula yezingane ezincane kakhulu ezinemibala egqamile.
Imfihlo ye-Hamish kanye neMfihlo. Le yincwadi entsha ebhalwe uLiz Walker wezingane ezineminyaka eyi-8 kuya kwengu-12.
Funda nge- zezempilo, kwezomthetho, ezemfundo futhi ubuhlobo imiphumela yokusetshenziswa kwezithombe zocansi ku- I-Foundation Foundation iwebhusayithi kanye nezeluleko ku- ezingakwenza usishiye phansi isikole.
Bona ukuthi i- Amasiko aphikisiwe Abazali Uhlelo isiza abazali ukubhekana nezinguquko zamanje zamasiko nomthelela wazo ezinganeni.
Ukuqonda ukuthi kungaba yinselele kanjani ukuzivocavoca umzimba ukuzithiba. Ividiyo ehlekisayo ngudokotela wezengqondo ophezulu.
Ukuvikeleka kokuziphatha kocansi okuyingozi okusebenziseka kalula i-toolkit kusuka kuLucy Faithfull Foundation.
Iseluleko samahhala esivela ekusizeni okuhlukumeza ingane ngokumelene nokuhlukunyezwa kwezingane Misa Manje! Abazali bavikele
Yilwa Nomuthi Omusha Ungakhuluma kanjani nezingane zakho nge-porn.
Nansi into ebalulekile umbiko kusukela Izindaba ze-intanethi ekuphepheni kwe-intanethi kanye ne-piracy yedijithali ngamathiphu wokugcina ingane yakho iphephile ngenkathi ivula inetha.
Iseluleko esivela ku I-NSPCC mayelana ne-inthanethi ye-inthanethi.
Iningi lamawebhusayithi amakhulu okutakula mahhala njengawo yourbrainonporn.com; RebootNation.org; PornHelp; NoFap.com; Fightenewdrug.org; Hamba Ubukhulu futhi Umlutha we-Porn Internet abezenkolo kepha banabasebenzisi benkolo nabo. Isebenziseka kubazali ukubheka ukuthola umbono walokho labo abelulame sebehlangabezane nakho futhi manje babhekana nakho njengoba belungisa.
Izinsiza ezisekelwe enkolweni
Kunemithombo enhle etholakalayo futhi emiphakathini esekelwe ekukholweni njengokuthi Ubuqotho bubuyiselwe kumaKatolika, kumaKristu ngokuvamile Iphrojekthi ye-Naked iqiniso (UK) Indlela I-Porn Eyingozi Ngayo (I-US), kanye MuslimMatters kulabo bokholo lwamaSulumane. Sicela usithinte uma kukhona amanye amaphrojekthi asuselwa enkolweni esingawasayina.
Ukusetshenziswa njalo kwezithombe zocansi ze-inthanethi zezingane kubumba ubuchopho bengane, ithempulethi yabo yokuvusa ucansi. Inethonya elikhulu ekuthumeleni imiyalezo yocansi kanye nokuxhashazwa kwe-inthanethi. Ukukhathazeka ngabazali kufanele kube yimithelela engaba khona engokomthetho yengane yabo ekuthuthukiseni ukusetshenziswa kwezithombe zocansi eziyinkinga okuholela ekuziphatheni okubi ngokobulili kwabanye. Lokhu Page eqenjini Lesazi eliqokwe nguHulumeni waseScotland ekuziphatheni okubi ngokobulili ezinganeni linikeza izibonelo zokuziphatha okunjalo. Bona lapha futhi ukuthola eminye imininingwane ebalulekile yokuthumelelana imiyalezo yocansi, ukuphindisela izithombe zobulili ezingcolile njll okushushiswa kakhulu ngamaphoyisa. Kuthunyelwa imiyalezo yocansi eScotland. Kuthunyelwa imiyalezo yocansi I-England, Wales neNyakatho Ireland.
Bheka inqubomgomo entsha yokulimaza yokuziphatha kocansi eyingozi yokulwa nokuhlukunyezwa kwezingane kaLucy Faithfull Foundation i-toolkit kuhloswe ngayo kubazali, abanakekeli, amalungu omndeni kanye nochwepheshe. I-Reward Foundation ishiwo njengomthombo wosizo.
E-UK, amaphoyisa adingeka ngokomthetho ukuthi aqaphele noma yiziphi izehlakalo zokuthumela imiyalezo yocansi ohlelweni lwe-Police Criminal History. Uma ingane yakho ibanjwe nezithombe ezingcolile futhi ibiphoqa ukuyithola noma ukuyidlulisela kwabanye, ingabekwa icala ngamaphoyisa. Ngenxa yokuthi amacala ezocansi athathwa njengamakhulu kakhulu ngamaphoyisa, lelo cala lokuthumelelana imiyalezo yocansi, elirekhodwe ohlelweni lomlando wamacala obugebengu, lizodluliselwa kozokuba umqashi lapho kucelwa isheke elithuthukisiwe lokusebenza nabantu abasengozini. Lokhu kubandakanya umsebenzi wokuzithandela.
Ukuthumelelana imiyalezo yocansi kungabonakala kuyindlela engenabungozi yokudlala ngothando, kepha uma kunolaka noma kuphoqa, umthelela ungaba nemithelela emibi yesikhathi eside kumathemba engane yakho yomsebenzi. Izithombe zobulili ezingcolile ezivamile zisebenzisa ukuphoqelelwa kwamamodeli.
Uhulumeni wase-UK ukuhlehlisile (hhayi ukukhanselwa) ukuzibophezela kwakhe ekuvikeleni izingane online. Bona lokhu incwadi evela kumphathiswa kahulumeni kuNobhala we-Children's Charities 'Coalition on Internet Safety. Inhloso yomthetho wokuqinisekisa iminyaka (Umthetho Wezomnotho Wedijithali, Ingxenye 3) kwakuwukwenza izinkampani zezentengiso zezithombe zocansi zifake isoftware yokuqinisekisa iminyaka esebenza kangcono ukuvimbela ukufinyelela kwabangaphansi kweminyaka engu-18 kumawebhusayithi ezithombe zocansi ezentengiso. Bona lokhu blog ngakho ukuthola eminye imininingwane. Imithethonqubo emisha ifuna ukufaka amasayithi ezinkundla zokuxhumana kanye namawebhusayithi ezithombe zocansi ezentengiso ngaphansi komthetho omusha I-Online Harms Bill kepha lokho akulindelekile ukuthi kulunge kuze kube ngu-2023-24. Izobeka umsebenzi wokunakekelwa. Khumbula, ungabhalela neLungu lePhalamende lakho noma ngabe ukuphi futhi ufune ukuthi uhulumeni akhiqize umthetho wokuqinisekisa iminyaka ukuze avikele izingane zakho online. Kungumsebenzi wabo ukuvikela abasengozini enkulu emphakathini.
Sicela uxhumane nathi uma kukhona indawo ongathanda ukuba siyihlanganise kulokhu. Sizobe sithuthukisa ukwaziswa okwengeziwe kuwebhusayithi yethu kulezi zinyanga ezizayo. Bhalisela e-newsletter yethu yezindaba ezithokozisa (ngezansi kwekhasi) bese usilandela ku-Twitter (@brain_love_sex) ngezintuthuko zakamuva.
Umhlahlandlela Wabazali wagcina ukubuyekezwa ngomhlaka 18 Februwari 2021